Warbixinta xaquuqul insaanka ee UN-ka oo lagu cadeeyay in Ciidamo Soomaali ah.... - Awdinle Online
Home News Warbixinta xaquuqul insaanka ee UN-ka oo lagu cadeeyay in Ciidamo Soomaali ah….
A member of the Afar Special Forces stands in front of the debris of a house on the outskirts of the village of Bisober, Tigray Region, Ethiopia, on Dec. 9. Several houses in the village were damaged during confrontations between the Tigray Forces and Ethiopian Defense Forces. EDUARDO SOTERAS/AFP via Getty Images
Ciidamada Soomaalida ee lagu tababarayay Ereteriya waxa ay ka qeybqaateen dagaalkii Tigray ee sababay dhimashada kumanaan kun qof iyo malaayiin kale, sida lagu sheegay warbixin gaar ah oo xuquuqda aadanaha ku saabsan oo ay soo saartay Qaramada Midoobay taas oo sii murginaysaa walaaca ay qabaan waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurtooda waysan.
Laga soo bilaabo Nofeembar 2020, Ciidamada Difaaca Qaranka Itoobiya [ENDF] iyo dhiggooda ka socda Ereteriya waxa ay saldhigyo ka dhigteen gobolka Tigray iyagoo baacsanaya dagaalyahannada Jabhadda Xoreynta Dadweynaha ee Tigreega [TPLF] laakiin warbixino badan ayaa sheegaya in ay si weyn ugu xadgudbeen xuquuqda aadanaha sidoo kale ay adeegsadeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo si qarsoodi ah looga qaaday Muqdisho.
Horraantii sanadkan, warbaahinta guddaha iyo dibada ayaa daabacay warbixinno ku saabsan ka qayb qaadashada askarta Soomaalida ee dagaalka Tigreega halkaasoo la soo sheegay in qaarkood lagu dilay, laakiin Dowladda Faderaalka ah ayaa beeniyay sheegashadaas, inkastoo ay qiratay in boqolaal askari ay tababar ugu qaaday Eritrea.
Qeybo ka mid ah warbixinada waxa ay muujinayaan in Qaramada Midoobay heshay caddeymo la taaban karo oo muujinaya in askarta Soomaalida ay ku lug yeesheen dagaalka Tigreega, iyadoo xustay in ay la safnaayeen kuwa ka socda Eritrea.
Inkasta oo warbixintu aysan sheegin tirada rasmiga ah ee askarta Soomaalida ah ee ka hawlgasha Tigreega, haddana, waxa ay sheegaysaa in ay ahaayeen kuwa laga raray xeryihii militariga ee ay tababarka ku qaadanayeen kana gudbay dhanka Tigray.
Warbixinta qaramada Midoobay waxaa sheegtay in ciidamada Soomaalida ay joogeen gudaha Itoobiya xilligii Axum lagu xasuuqay boqolaal qof oo ka soo jeeda Gobolka Tigray.
Magaalada Axum oo lagu sheegay in ay tahay macbud barakaysan oo ku yaalla waqooyiga Tigray ee Itoobiya.
Warbixinno badan oo ay daabaceen kooxaha u dooda xuquuqda iyo warbaahinta caalamiga ah ayaa shaaca ka qaaday dilal wadareedyo lala beegsaday dadka ku cibaadaysanayay magaalada bishii November ee sanadkii hore, oo u badnaa caruur aan waxba galabsan iyo dumarka.
“Marka laga soo tago wararka sheegaya ku lug lahaanshaha ciidamada Eriteriya dagaalka Tigreega, Ergeyga Gaarka ah wuxuu sidoo kale helay macluumaad iyo warbixino sheegaya in askarta Soomaalida ee laga raray xeryaha tababarka militariga ee Eritrea lana geeyay jiida hore ee Tigreega, halkaas oo ay ku wehlinayeen ciidamada Eritrea markii ay ka gudbayeen Xadka Ethiopia” ayaa lagu yiri warbixinta Qaramada Midoobay.
“Dowladda Soomaaliya waxa ay beenisay ka qeybgalka askarta Soomaalida ee dagaalka Tigreega. Waxaa lagu soo warramayaa in guddi ka tirsan baarlamaanka ay madaxweynaha Soomaaliya ka dalbadeen sharraxaad ku saabsan halka ay ku sugan yihiin ciidamadii Soomaaliya ee loo diray Eritrea, Ergeyga Gaarka ah waxaa lagu wargeliyey in guddiyada arrimaha dibedda iyo difaaca ee Barlamaanka ay ugu baaqeen madaxa Qaranka (Farmaajo ) in uu u diro wafdi xaqiiqo raadin ah Asmara si baaritaan loogu sameeyo” ayaa la raaciyay warbixinta Qaramada Midoobay.
Dil wadareedka ayaa socday muddo seddex toddobaad ah waana waqtigaan xogta la helay lagu muujiyay joogitaanka askarta Soomaalida iyo kuwa Eritrea ee Tigreega.
Itoobiya waxa ay beenisay wararkaas waxa ayna qiratay joogitaanka ciidamada Eritrea, oo uu ra’iisul wasaare Abiy Ahmed u ballanqaaday inuu ka baxayo, laakiin weli ma uusan fulin ballantii.
Soomaaliya, waalidiinta askarta la sheegay in loo qaaday jidaha hore ee dagaalka iyagoo dalbanaya halka ay ku sugan yihiin curuurtoodo.
Toddobaadyo ka hor ayay waalidiintu dib ugu soo laabteen waddooyinka magaalada Muqdisho si ay u weydiistaan madaxweyne Farmaajo in uu dalka ku soo celiyo caruurta maqan.
Warar is burinaya ayaa tilmaamaya in boqolaal askari oo Soomaali ah laga yaabo in ay ku dhinteen dagaalka halka kuwa kale ay sheeganayaan in ay ku dayayaan in ay ka baxsadaan Eretareeya ayna u baxsadaan dhulkooda hooyo.
Previous articleTaliye Xijaar oo shaaciyay amar ku socda Saraakiisha & Ciidamada Booliska
Next articleSoomaaliya iyo Sacuudiga oo ka wada hadlay Arrimo xasaasi